Don'tmaghi ihe ahia bu | Martech Zone
Sunday, July 27, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
I chewo echiche nke ọma n'okwu ahụ Marketing? Dị ka ọ dị n'ọtụtụ mkpụrụ okwu, akọwapụtagharị ma kọwagharịa oge. Wikipedia nyere nkọwa a:
Iszụ ahịa bụ usoro na-aga n’ihu nke ịhazi na imezu ngwakọta ahịa (Ngwaahịa, Ahịa, Ọnọdụ, Nkwalite a na-akpọkarị 4 Ps) maka ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ echiche iji mepụta mgbanwe n'etiti ndị mmadụ na otu. Wikipedia
Na-ada nke onwe, ọ bụ? Ahịa gbanwere n'ihi ahịa gbanwere. Ka ahịa na-eto ma jikọọ ya na ndị na-azụ ahịa, ndị na-ere ahịa gbanwere otu esi ere ngwaahịa ha.
Iji katalọgụ na akwụkwọ akụkọ na mkpọsa… na-agụsị akwụkwọ na telivishọn mkpọsa ngwá ahịa, ndị ahịa in ahịafuru efu.
Nkume Doc a na-akpọ ihe anyị na-eme Ax na isi ahia n'isi ya dere nke ọma, Ahịa bụ mkparịta ụka na Cluetrain Manifesto.
Nsogbu nke ahịa ọhụrụ ahụ bụ na ọ bụ naanị otu ụzọ, site na "nzukọ na onye ọ bụla". Anyị chefuru ihe ahịa bụ n'ezie.
Ahia bu ndi mmadu, ahia abughi ndi ozo. Ire ahia bu ike gi iji gwa ndi mmadu okwu, obughi uzo ozo i ji agwa ha okwu. Ndị na-ere ahịa bụ ndị mmadụ, ha ga-eji usoro ọ bụla ma ọ bụ usoro ọ bụla ha nwere ike iji kwurịta okwu na ahịa ahụ.
Foto dị n'elu dị mma. Enweghị akara ngosi, enweghị akwụkwọ ọkwa, enweghị teas… ọbụnadị agba dị iche iche iji mara ọdịiche dị na ngwaahịa gị. Naanị ndị mmadụ. Ndị mmadụ na-agwa ibe ha okwu. Ndị mmadụ na ngwaahịa na n'aka. Ndị mmadụ na-agwa azụmahịa ahụ okwu. Ka a sịkwa ihe mere ahịa ndị ọrụ ugbo na-eto n'obodo niile! Ndị ahịa gị chọrọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, ike gwụrụ ha na ha enweghị ike ịgwa onye ọ bụla okwu! Ọ dị ezigbo iche na 100 afọ gara aga, ka ọ bụ?
Eziokwu bu na i chefuola ahia is. Ahịa abụghị 4 freakin P's ọzọ. Ahịa na-ekere òkè na Ahịa. Ire ahia adighi etinye webusaiti, na ezipu ozi edetu, ituputa akwukwo ocha na iziga akwukwo ozi. Iszụ ahịa na ndị ahịa gị, ma ọ bụ ndị ahịa ị na-ele ihe anya, na ịgwa ha eziokwu na eziokwu.
Ọ bụrụ na ị naghị ekwurịta okwu (nke ahụ abụghị naanị ikwu okwu, nke ahụ na-ege ntị ma na-aza), ị naghị ere ahịa. Ọ bụrụ na ịnweghị ịnabata mgbasa ozi mmekọrịta dịka blọọgụ, netwọkụ mmekọrịta, mkpanaka (nkwukọrịta), vidiyo (nkwukọrịta) na email (nkwukọrịta) dị ka isi ndị na-ajụ ase, ị naghị ere ahịa.
My blog bụ banyere leveraging technology ka mma gị ike na-ekwurịta okwu na gị ahịa. Ọ bụ ya mere m ji nwee ọtụtụ isiokwu na njikọta - enwere ike teknụzụ ọhụụ iji nyere gị aka. Nọdụ ala ma chee echiche banyere okwu ahụ Marketing na otu esi enweta ya, ọ bụghị ihe ọ ghọrọ.
Foto nke oge a site na weebụsaịtị San Rafael. 1908 Foto foto site na Foto Blog dị afọ 100.
Tags: AnalyticsAuditing ikaWordPress
Lynn na -eti mkpu
Jul 27, 2008 na 2:34 PM
Obi dị m ezigbo ụtọ na ị dere Douglas a! M na-arụ ọrụ n'ahịa mana enwere m nsogbu na ụzọ a na-abịakwute ya na ụzọ m chere na ọ kwesịrị.
Ihe mere m ji hụ mgbasa ozi mgbasa ozi n'anya bụ n'ihi na ọ na-ejikọ ma na-ejikọ anyị na mkpa mmekọrịta anyị.
Ahịa (ele 4 p) anaghị arụ ọrụ dị ka ọ dị na mbụ. Ndi mmadu adighi njikere ka agwa ha ma obu kwa ozo, odighi aka ebiri anyi uzo a - anyi bu ndi mmadu!
Mightfọdụ nwere ike ịrụ ụka na ụdị dijitalụ abụghị nke onwe ma ọ bụghị na-akpọ oku 'ezigbo ụwa' mana m kwenyere na nke ahụ abụghị eziokwu.
Ka ị na-amụkwu, rụkọta ọrụ, sonye na ụwa dijitalụ, ọ ga-esikwu agụụ ike ime ya na 'ezigbo mmadụ.
Jul 28, 2008 na 10:22 PM
Daalụ Lynn! Enwere m ekele maka nzaghachi ma kelee gị maka ekele. Oge eruola mgbe ndị mmadụ bidoro kwenye n'ezie na ngwaahịa na ọrụ ha - yabụ ọ dị mfe ire ma ị gaghị ekwubiga okwu ókè.
Jul 28, 2008 na 12:31 PM
Enweghị ike ikwenye gị na Doug.
Ebe ụfọdụ n'ụzọ, ahịa si 'Big M' gaa 'Little M' n'uche ndị mmadụ. Ọ dịkarịrị naanị maka akụkụ nkwado ya na itinye aka na ntụgharị. Ọbụna anyị ka na-ahụ nke a taa na mpaghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ebe ọrụ bụ idobe ndị mmeri 'na ozi'. Ihe ndị a niile yiri ka ha emeela ka otu ọgbọ nke ndị na-ere ahịa na-eche echiche n'ime ma na-elekwasị anya naanị n'ogo nke okike ha iji mebie ọgbaghara na nkwukọrịta. Nke a butere ụfọdụ nnukwu nkụda mmụọ na ndị isi azụmaahịa anyị gbara ajụjụ ọnụ maka akwụkwọ anyị na ihu a… ha na-ele ahịa anya dị ka naanị ụlọ ahịa na-agba ọsọ na-adịghị enye aka na azụmaahịa a ma chọọ ka a chịkwaa ya.
You're na-akụ nsogbu ahụ ebe a. Nkọwa nke ịzụ ahịa abụghị ihe m mụtara ọzụzụ kwesịrị ịbụ. Na ọ bụ kachasi mkpa, ọrụ bụ ihe bụ isi na ihe dị mkpa karịa ọtụtụ na-eme ya a ọ bụ ọrụ nke 'ewu ezigbo na miri emi njikọ ihe na-azụ ahịa kasị'. Ọ na-amalite site na ịghọta mkpa ha na ihe ha chọrọ kpamkpam ka ụlọ ọrụ gị na-arụ ọrụ na iwulite ngwaahịa ndị mmadụ chọrọ ịzụta wee lekwasị anya n'ụzọ ziri ezi nke ịkọrọ ndị ahịa ihe kpatara ndị ahịa nwere ike iji nwee mmasị. Ikwu mkpu 'zụta ngwaahịa m' abaghị uru (ọ nweghị onye na-ege ntị ọzọ)… iji usoro mgbasa ozi na ụdị ndị ọzọ nke mbipụta ọdịnaya iji gosipụta njikọ dị irè karị.
Enwere m mmasị na ọnụ ọgụgụ nke obodo ndị na-emepe emepe gburugburu ụdị ihe ndị a… mgbe ụfọdụ na ebe anyị na-agatụghị eche tupu oge a na ahịa. Daalụ maka echiche gị na ọrụ gị ebe a.
Jul 28, 2008 na 10:21 PM
Ọ na-adị anyị ka anyị na-agaghachi azụ n’oge, ọ bụghị ya? N'ikpeazụ enwere mmetụta ndị mmadụ na-agbasa!